Caffeen labsiiwwan addaddaa raggaasise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Caffeen labsiiwwan addaddaa raggaasise
On Feb 19, 2020 64
Finfinnee, Gurraandhala 11, 2012 (FBC) – Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaatin labsiiwwan addaddaa raggaasise.
Caffeen yaa’iisaatin wixineewwan labsii addaddaarratti mari’atee raggaasiseera.
Wixinee labsii itti waamama Tumsaa Indoowumantii Misooma Oromiyaatiif murteessuuf bahe iratti mari’atee raggaasiseera.
Tumsaa Indoowumantiin dhaabbata qabeenya naannoo Oromiyaatin hundaa’e waan ta’eef, akkaataa ummanni naannichaa hojii misooma hawaasummaa fi diinagdee indoowumantichi gaggeessu irraa fayyadamaa itti ta’uu fi gama mootummaatiinis sirna ittiin hordofamuu fi to’atamuu danda’u diriirsuuf, akkasumas, kaayyoo fi ergama hundeeffameef gahumsaan raawwachuu akka danda’uuf itti waamamni isaa Abbaa Taayitaa To’annoo Dhaabbilee Misooma Mootummaa Oromiyaa akka ta’uuf murtaa’era.
Labsichi lakkoofsa 225/2012 ta’ee kan hojiirra oolu murtaa’era.
Caffeen Oromiyaa, labsii zoonii diinagdee addaa Gadaa, labsii bulchiinsa hojiiwwan misooma albuudaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan fooyyessuuf ba’e, labsii sirna qophii wixinee seeraa mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf ba’e irratti mari’achuudhan raggaasiseera.
Caffichi walga’iisaa kaleessa kan eegale yammuu ta’u, oolmaasaa guyyaa jalqabaa kaleessatiin gabaasa raawwii hojii raawwachiistuu mootummaa naannichaa ji’oottan jahan darbanii itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhiyeessan irratti mari’achuudhan raggaasisuun ni yaadatama.
Dhaabbileen amantaa vaayrasicha ittisuuf tarkaanfii fudhataniif Injiinar Taakkalaan…
Naannon Gaambeellaa vaayrasii koroonaa ittisuuf murteewwan dabarse
Afaar, Hararii fi Dirree Dawaan tamsa’ina vaayrasii koroonaa ittisuuf…
Manni maree manneen amantaa hordoftoota wangeelaa hundaa’e
Waggaa 9ffaan dhagaan bu’uuraa Hidha Haaromsaa…
Hordoftoonni amantaa Ortodooksii mana isaanitii kadhannaa…
Manneen Murtii Federaalaa guyyootii dabalataa 23f gariin…
Dhaabbileen amantaa vaayrasicha ittisuuf tarkaanfii…
Naannon Gaambeellaa vaayrasii koroonaa ittisuuf murteewwan…
Afaar, Hararii fi Dirree Dawaan tamsa’ina vaayrasii…
Oduu biyya keessaa1259